Tuesday April 05, 2022 - 20:09:27
Qoraalka oo lasoo dhigay barta ay NISA ku leedahay internetka ayaa lagu sheegay in hay’addu ay madaxda DF u gudbisay warbixin ku saabsan khatar ay maleegayaan Al-Shabaab taas oo ay rabaan in ay ku bartilmaameedsadaan Madaxwaynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Hadaba iyadoo qaar badan oo kamid ah bulshada Soomaaliyeed ay is wadiinayaan warbixintaan kasoo baxday NISA iyo ujeedada ka dambaysa ayaa Shabakada Wararka SomaliMeMo waxaa u suurta-gashay inay la xiriirto sarkaal sare oo ka tirsan Jihaazka Amniga ee Xarakada Al-Shabaab.
Sarkaalka oo aan magaciisa u qarinay arrimo amni daraadeed ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamay hadalka kasoo yeeray sirdoonka DF-ka, wuxuu is waydiiyay xilliga ay NISA awoodda u yeelatay inay sii ogaato hawlgal heer sare ah oo ay 'Mujaahidiintu' ku beegsanayaan mas'uuliyiinta DF.
"Waa wax aad loogu qoslo runtii. NISA waxay ogaan waysay markii aan mas'uuliyiinta ridada iyo saraakiishooda xafiisyada iyo xarumahooda ugu dhacaynay. Waxay ogaan waayeen markii aan Yariisoow xaruntiisa isagoo shir kula jira xubnaha maamulkiisa ku beegsanay, waxay ogaan waaweeyn markaan isbuucii hore Xalane u dhacnay. Ma garan karo halka ay ka keeni karaan awoodda ay ku ogaan karaan hawlgal aan ku beegsanayno labada nin ee ugu tunka weyn Murtadiinta, Waxaan kuu xaqiijinayaa in aysan nimankaasi laheyn awooddii iyo kartidii ay qorshayaasheena ku ogaan lahaayeen” ayuu yiri sarkaalka ka tisan Amniga Al-Shabaab.
Sarkaalka la hadlay SomaliMeMo ayaa sheegay inuusan haba yaraatee jirin nin lagu magacaabo Maxamad Maahir oo ka tirsan Mujaahidiinta, iskaba dhaaf inuu yahay sarkaal sare oo u xilsaaran khaarijinta Rooble iyo Farmaajo.
" Hadalka kasoo yeeray sirdoonka ridada wuxuu noola muuqdaa mid salka ku haya mushkilad dhexdooda ah oo ay NISA diyaarisay qorshe ka dhan ah qaar ka tirsan madaxda ugu sareysa ridada” Ayuu hadalkiisa sii raaciyay sarkaalka ka tirsan Amniga Al-Shabaab kaas oo shaaciyay in waqtiga lagu soo aadiyay hadalkaas iyo qaabka uu u qoranyahayba ay tilmaamayso xubno gaar ah oo iyagu dareensan halista kusoo wajahan balse aanan lahayn awoodii ay iskaga difaaci lahaayeen halistaas ama ay si cad ugu shaacin lahaayeen inta aysan albaabka usoo gar-garaacin sida uu sarkaalku hadalka u dhigay.
" In kasta oo ay madaxda iyo saraakiisha ridadu mar walba bartilmaameed noo yihiin hadana ma aqbalayno in ay dhibaatooyin dhexdooda ah annaga nala soo doontaan” ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay sarkaalka ka tirsan jihaazka amniga Xarakada Al-Shabaab.
Waxaa xusid mudan in sanaddii lasoo dhaafay Taliska NISA uu si hoose udilay Sarkaalad lagu magacaabi jiray Ikraan Tahliil kadibna uu ku nabay Al Shabaab oo iyana markii dambe iska beeniyay eedayntaas.